Mombe Dzemakomba Dzine Ngozi Chaizvo Kune Vacheche Here? | Imbwa dzepasi rose
Ko pit bull zvine njodzi kana tiine mwana here?
Omar higueras | | Imbwa dzinobereka
Kune vanhu vazhinji, pit bull imhando ine hukasha uye ine njodzi imbwa. Mashoma marudzi ane mukurumbira wakashata seizvi, zvinokodzera, muchidimbu, kune yavo inoshamisa physiognomy uye ngano dzisingaperi uye kufungira zvisizvo anomhanya achimukomberedza.
Kana paine rudzi rwakashungurudzwa kubvira kwayakatangira, izvi pasina mubvunzo ndezve pit pit. Pakutanga kubva kuUnited States, iyo American pit bull terrier yakawana zita rayo uye mukurumbira apo muzana ramakore rechiXNUMX mabhuru egoroguru akasanganiswa neaya eiyo terrier kuti ipe pit pit terrier hybrid. wekutanga magumo angave ekurwa mumakuva nemabhuru, makonzo kana dzimwe imbwa. Icho chinokwana 'gomba' zvinoreva kuti 'gomba'.
Iyo imbwa ine yakasimba, yakashinga, yakatsunga uye inoshinga hunhu. Chiyero che United Kennel Kirabhu, yakatsunga kuti haisi imbwa yakakodzera kune varidzi avo vanotsvaga imbwa dzinorinda, nekuti vane hushamwari zvakanyanya, kunyangwe kune vausingazive. Kunyange zvakadaro, vanowanzo tarisa imwe nhanho yekurwisa dzimwe imbwaNekudaro, zvinokurudzirwa kuti varidzi vagarisane zvakanaka uye vadzidzise mukuda kwekuteerera.
Dzidzo dzakawanda dzakaitwa idzo dzaive nechinangwa chekuona kana paine 'hukasha' majini akavatungamira kuti vaite dzimwe nguva nechisimba. Mhedziso yagara yakafanana: Kuyedza kutsvaga chimwe chinhu chinoratidza husahwira hwerudzi urwu hakusi kungoedza ruramisa kukanganisa kunoitwa nevaridzi panguva yekurerwa uye dzidzo yemhuka.
Dzidzo yembwa inotanga kubva panguva yatino funga kuitumidza zita. Kana tikamuti 'Fiera' uye tikamuisa kora yakapinza paari, zvingangoita kuti timuite mhuka isina kuvimba, uye zvichidaro, ine njodzi kune vamwe.
Dzidzo iyo yatinopa kune yedu chipfuwo panguva yayo kushamwaridzana nhanho (kubva pamasvondo matatu kusvika kumwedzi mitatu angangoita), ichave iri nguva yekumisikidza maitiro avo. Pakati peiyi nhanho, gomba renzombe, uye chero imwe mhuka yatinoda kuve yemagariro, isu tinofanirwa kuifumura kune zvakawanda zvekunze zvinodzivirira kunzvenga matambudziko emangwana.
Kuchengeta imbwa kure nevanhu panguva yake yekudyidzana danho kunokanganisa maitiro ake paanovaona muhupenyu hwake hwese semunhu mukuru.
Pitbulls uye Vacheche - Hukama hweCuddly!
Iyo pit bull haifanirwe kuve ine njodzi kune chero munhu, ndoda kumucheche. Muchokwadi, nyanzvi dzinokurudzira kuti imbwa dzinoshamwaridzana nevana mumwedzi yavo yekutanga yehupenyu. Icho chikonzero chiri nyore kwazvo: vana vadiki vanofamba nekukurumidza uye vanoomarara dzimwe nguva. Kufumura imbwa kune aya marudzi emafambiro anogona kuoneka muhupenyu hwavo hwezuva nezuva kuchavaita kuti vaite zvakanaka uye zvakasikwa kana ivo vari vakuru.
Izvo zvakakosha kuti ngatijairire chero mhuka kuvapo kwevana kuvaratidza kuti havasi tyisidziro kana chipingamupinyi pakati pevaridzi rudo uye iye. Zvine musoro here?
Ichokwadi ndechekuti pit bull haisi mhuka ine njodzi zvakanyanya kupfuura chero imwe. Muchokwadi, pakutanga kwezana ramakore rechimakumi maviri, rudzi urwu rwakafungidzirwa nevazhinji kuve irwo yakanakira kuchengeta vana kumbaNekudaro, ivo vakapihwa zita remadunhurirwa 'nanny imbwa' kweanopfuura zana nehafu.
Uye chii chaive chikonzero cheiyi zita remadunhurirwa? Tarisa vhidhiyo iyi uye iwe uchanzwisisa:
Zvinoshamisa, kuseri kwechimiro ichi chinoshamisa uye chakavezwa canine, inovanza mhuka yakavimbika uye inokatyamadza. Bhuru remakomba hadzisi imbwa dzine kuruma kune simba kwazvo, uye hadzisi dzinonyanya hasha nemasikirwo Dambudziko, kunyangwe richinzwika kunge diki, riri mune avo vanorera nekuvadzidzisa, uyezve, mukushambadzira kwakaipa uye kwakashata kwavanako.
Zvakadaro, nekuda kwekuti hukama huripo pakati pembwa nemwana mudiki hunogona kubatsira uye nerudo hazvireve kuti matanho ekudzivirira haafanire kutorwa. Isu vanhu vakuru tinofanira kuona izvozvo imbwa haina kutora godo kana mwana achisvika Kumba, isu tinofanirwa zvakare kuziva kuti vana vadiki vanogona kuneta zvakanyanya uye kukuvadza mhuka dzinovaraidza pavanenge vachitamba, izvo, mukuzvidzivirira, zvinogona kukonzera kuita kwechisimba kune mhuka.
Ngatirangarirei kuti kuitira kugara pamwe kwemhuka nemwana mudiki kuve kwakanaka zvakakosha kuti isu tidzidzise zvese mwana nembwa kuti varemekedzane. Rudo nerudo pakati pevaviri zvichauya nekufamba kwenguva.
Inogona kufarira iwe: Imbwa nevana: maitiro ekuwana hukama hwakanaka
Ndeipi yako pfungwa pamusoro pehukama hwemakomba emakomba nevana vadiki? Wakambodzidzisa chero munhu here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Imbwa nyika » General Imbwa » Imbwa dzinobereka » Ko pit bull zvine njodzi kana tiine mwana here?
Ini zvakare ndine imwe uye chokwadi ndechekuti akanaka kwazvo uye handina chekutaura nezvake, chete kuti akangwara zvakanyanya semufudzi wechiGerman kana zvimwe zvakanaka ndinosiya komendi iyi ndatenda nekuchengetedza rudzi urwu
Ndine imwe. Asi ini handikwanise kunyunyuta. Akangwara uye anoda vana. Vanotamba bhora nevana vavo shamwari. Hongu zvirokwazvo. Haafarire kushungurudzwa.
Pindura kuna Odilo
Ndine mwana ane gore rimwe ane mwedzi mitanhatu ekuberekwa uye 1 maArgentina maDogos, 7 Rotwailer nembwanana 3, Pitbull Crossbreed, kunze kwevamwe vana vatatu, vese vanonamata mwanasikana wangu, vanodzidziswa kuzvibata nevamwe uye ini pamwe nemukadzi wangu dzidzisa mwana kuti asanete imbwa futi. Izvo zvese zvinoenderana nekuti ndiani anobereka uye sei.
Zvakaipira kupa chikafu chevanhu kune imbwa
Scolopendras ine njodzi kune imbwa yako